Dr. Tint Swe's Writings: OSAS အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာရောဂါ
အသက် ၆၁ နှစ် အမျိုးသမီးပါရှင်။ ဆီးချို ရောဂါ ရှိတာ (၁၀ )နှစ်ရှိပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁) လောက်က မောမောလာလို့ အဆုတ်အထူးကုနဲ့ပြကြည့်တော့ အာက်ဆီဂျင်က ၆၀ ပဲရှိလို့ အရေးပေါ်ဆေးရုံတက်ခဲ့ပါတယ်။ Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) ရောဂါလို့ပြောပါတယ်။ BiPAP စက်တပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောလို့ပါရှင့်။ အောက်ဆီဂျင် ကို တနေ့လုံးနီးပါး ရှူနေရပါတယ်။ အိပ်ချိန် မရှူမိရင် ၅၀ ကျော်လောက်ပဲရှိလို့ပါ ဆရာ။ လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ ဆေးစစ်ချက်လေးတွေ ပူးတွဲပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ အမှားပါတာများရှိရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းပန်ပါတယ် ဆရာ။
အထူးကုဆရာဝန်တွေနဲ့ ပြသ ကုသနေတာကောင်း။ ထူးဖြေရန်မရှိပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ မေးခွန်းမပါသလိုဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ OSAS ရောဂါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဆရာရေးထားတာများရှိရင် ဖတ်ချင်လို့ပါ။ ရောဂါအကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်လို့ပါ။ ခုလောလောဆယ် ByPAP စက်ဝယ်ဖို့ မတတ်နိုင်သေးလို့ တခြား သက်သာမဲ့နည်းလမ်းများရှိဦးမလား သိချင်လို့ပါ။ မေးခွန်းထပ်မေးရသလိုဖြစ်တာမို့ အားနာပါတယ် ဆရာ။ ဆေးပညာဗဟုသုတတွေ အမြဲဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Obstructive sleep apnea ဆိုတာ အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာရောဂါတခုဖြစ်တယ်။ ဆိုးတယ်။ ဆောရီး။ အိပ်နေရင်း ယာယီ အသက်ရှူရပ်သွားစေနိုင်တယ်။ အများဆုံးဖြစ်တဲ့အမျိုးအစားမှာ လည်ချောင်းကြွက်သားတွေ တခါတခါ ပျော့ရာကနေ အသက်ရှူလမ်းကို ပိတ်နေလို့ဖြစ်တယ်။
ရောဂါလကဏာတွေကတော့ နေ့ခင်းမှာအိပ်ချင်နေမယ်။ ဟောက်သံထွက်မယ်။ အိပ်နေစဉ်မှာ အသက်ရှူမရလို့ နိုးလာတယ်။ ချုပ်ရသလိုဖြစ်မယ်။ နိုးရင် အာခေါင်ခြောက်နေမယ်။ မနက်ထ ခေါင်းကိုက်မယ်။ နေ့ခင်းမှာ အာရုံစိုက်ရတာ ခက်မယ်။ စိတ်မူပြောင်းမယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျတာနဲ့ ဒေါသပိုထွက်တာမျိုး။ သွေးတိုးမယ်။ ညချွေးထွက်မယ်။ လိင်စိတ်နည်းမယ်။
လူတိုင်းမှာ ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်များသူတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ အသက်ရှူလမ်းကျဉ်းနေသူတွေ၊ သွေးတိုးရှိသူတွေ၊ နှာစေတာမကြာခဏဖြစ်သူတွေ၊ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေမှာ ပိုဖြစ်ကြတယ်။ မိသားစုထဲတယောက်မကတွေ့ရတယ်။ ပန်းနာရှိရင် ပိုဆိုးတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်ချပါ။ အစားအစာရွေးပါ။ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ဆေးလိက် အရက် မသင့်။ ပက်လက်မအိပ်ပါနဲ့။
Illustration of continuous positive airway pressure (CPAP) mask နှာခေါင်းစည်း၊
Continuous positive airway pressure (CPAP) ဖိအားစနစ်၊
Oral device ခံတွင်းထည့်ကရိယာ၊
၁။ Hi ဆရာ တခုလောက်မေးချင်လို့ပါ
၃။ မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့်။ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်မယ့် လက္ခဏာတွေ သိလိုပါတယ်ရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လျက်ဆားတောင်းသလိုတော့ မမေးကြစေလိုပါ။ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်တယ်ဆိုတာ အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ရောဂါတခု ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်တဲ့သူ အသက် မပြော၊ ကျား-မ မပြော၊ ဘယ်တုန်းက ဘာဖြစ်နေတယ် မပြော။ အစာအိမ်လေနာ ရှိ မရှိ မပြော။
1. Bleeding Peptic Ulcer အစာအိမ်နာသွေးယိုခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/bleeding-peptic-ulcer.html
2. Bloody or tarry stools ဝမ်းအမည်းရောင်သွားခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/bloody-or-tarry-stools.html
3. Peptic ulcer လေနာဆိုတာ ဘုရင်မှာလည်းဖြစ်သည် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/peptic-ulcer.html